musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kupona Kwekenza Yemapapu Kwakawedzera
Chiratidzo cheAmerican Lung Association
Chirevo Chitsva: Kupona Kwekenza Yemapapu Kwakawedzera, Asi Kunoramba Kwakadzika Kwakaderera kune Vanhu VeRura
The itsva "State of Lung Cancer" mushumo inoratidza kuti cancer yemapapu yemakore mashanu ekupona yakawedzera 14.5% munyika kusvika 23.7% asi ichiri yakaderera zvakanyanya pakati penharaunda dzemavara. IAmerican Lung Association's 4th Chirevo chegore, chakaburitswa nhasi, chinoratidza kuti huwandu hwegomarara remapapu hunosiyana sei nenyika uye inoongorora zviratidzo zvakakosha muUS zvinosanganisira: nyaya nyowani, kupona, kuongororwa kwekutanga, kurapwa, kushaikwa kwekurapa uye kuongororwa mitengo.
Sekureva kwemushumo, kunze kwekuderera kwehuwandu hwekupona, vanhu veruvara vanobatwa nekenza yemapapu vanotarisana nemhedzisiro yakaipa zvichienzaniswa nevachena, kusanganisira kushomeka kwekukurumidza kuvhenekwa, kushomeka kwekurapwa nekuvhiyiwa uye kusawana kurapwa. Iri igore rechipiri iro "State of Lung Cancer" chirevo chinoongorora mutoro wegomarara remapapu pakati pemarudzi nemapoka madiki pamatunhu enyika nenyika.
“Chirevo ichi chinoburitsa nhau dzakakosha – vanhu vakawanda vari kurarama negomarara remapapu; zvisinei, inosimbisawo chokwadi chokuti, zvinosuruvarisa, kusiyana kwehutano kunopfuurira kune nharaunda dzemavara. Muchokwadi, nepo huwandu hwenyika hwekupona kwegomarara remapapu hwakakwira kusvika pa23.7%, hunoramba huri pa20% chete kunharaunda dzeruvara uye 18% yevatema vekuAmerica. Wese munhu anofanirwa nemukana wekurarama hupenyu huzere uye hune hutano, saka zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa kusaenzana kwehutano uku, "akadaro Harold Wimmer, Mutungamiriri wenyika uye CEO weLung Association.
Vanoda kusvika 236,000 vanhu muUS vachabatwa nekenza yemapapu gore rino. Chirevo cha2021 "State of Lung Cancer" chakawana mafambiro enyika anotevera muhuwandu hwekupona, kuongororwa kwekutanga, uye kurapwa kwechirwere:
Chiyero chekupona: Chirwere chegomarara chemapapu chine imwe yemhando yakaderera yemakore mashanu ekupona nekuti nyaya dzinowanzoonekwa panguva dzinotevera, apo isingarapike. Avhareji yenyika yevanhu vari kurarama makore mashanu mushure mekuongororwa kenza yemapapu ndeye 23.7%. Kupona mazinga aive akanakisa muConnecticut pa28.8%, ukuwo Alabama iri pachinzvimbo chakaipisisa pa18.4%.
Kuongororwa Kwepakutanga: Munyika, chikamu che24% chete chezviitiko zvinoonekwa pachiringazuva apo huwandu hwemakore mashanu ekupona hwakakwira zvakanyanya (60%). Nehurombo, 46% yemakesi haabatwe kusvika padanho rekupedzisira apo chiyero chekupona chiri 6% chete. Ekutanga kuongororwa mitengo yaive yakanakisa muMassachusetts (30%), uye yakaipisisa muHawaii (19%).
Kuongororwa kenza yemapapu: Kuongororwa kenza yemapapu neyepagore yakaderera-dose CT scans kune avo vari panjodzi huru inogona kuderedza kufa kwegomarara remapapu ne20%. Munyika, 5.7% chete yeavo vari panjodzi huru vakaongororwa. Massachusetts ine mwero wepamusoro-soro wekutarisa pa17.8%, nepo California neWyoming iine yakaderera pa1.0.
Kuvhiya Sekutanga Kosi Yekurapa: Gomarara remapapu rinowanzorapwa nekuvhiyiwa kana rikaonekwa richiripo uye risina kupararira. Munyika, 20.7% chete yenyaya dzakavhiyiwa.
Kushaya Kurapa: Pane zvikonzero zvakawanda nei varwere vangasawana kurapwa mushure mekuongororwa. Zvimwe zvezvikonzero izvi zvinogona kunge zvisingadzivisike, asi hapana munhu anofanirwa kuenda asina kurapwa nekuda kwekushaikwa kweanopa mupi kana ruzivo rwemurwere, ruseko rune chekuita nekenza yemapapu, kufatalism mushure mekuongororwa, kana mutengo wekurapwa. Munyika yose, chikamu che21.1% chezviitiko hazvigamuchire kurapwa.
Medicaid Coverage: Mari-ye-sevhisi nyika Medicaid zvirongwa ndevamwe vevabhadhari vehutano vasingadiwe kuvhara kuongororwa kenza yemapapu kune vanhu vari panjodzi huru. Sangano reLung Association rakaongorora marongero ekuvhara kenza yemapapu muhurumende yeMedicaid mubhadharo-ye-sevhisi zvirongwa kuti vaone mamiriro azvino ekuvharwa kwegomarara remapapu kune vanhu veMedicaid ndokuona kuti makumi mana anoti 'Medicaid mubhadharo-we-sevhisi zvirongwa zvinovhara kenza yemapapu, zvirongwa zvinomwe hazvipi kugovera, uye nyika nhatu dzakanga dzisina ruzivo rwuripo pamusoro pemitemo yavo yekuvhara.
Nepo "State of Lung Cancer" zvakawanikwa zvichiratidza basa rakakura rinofanira kuitwa, pane tariro. Muna Kurume wa2021, United States Preventive Services Task Force yakawedzera kurudziro yayo yekuongorora kuti ibatanidze zera rakakura uye mamwe aripo kana aimboputa. Izvi zvakawedzera zvakanyanya huwandu hwevakadzi nevatema vekuAmerica vanokodzera kuongororwa cancer yemapapu.
Sangano reLung rinokurudzira munhu wese kuti abatane mukuedza kupedza cancer yemapapu. Enda kuLung.org/solc kuti udzidze zvakawanda nezvegomarara remapapu mudunhu rako uye kusaina chikumbiro chedu chekuwedzera mari yeCenters for Disease Control and Prevention kuchengetedza hutano hwenyika yedu kubva kuchirwere, kusanganisira cancer yemapapu.
Kune vasvuta vemazuva ano uye vekare, kune zvinhu zvinoponesa upenyu. Tsvaga kana uchikodzera kuongororwa cancer yemapapu pa SavedByTheScan.org, wobva wataura nachiremba wako nezvekuongororwa.